नाडा अध्यक्षमा लड्न ध्रुब थापाले गरे प्यानल घोषणा :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
हिमालय अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष एंव फोर्स मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता ध्रुब थापाले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसनको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी थापाले आफ्नो प्यानलका सदस्यहरु सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्यानलमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका सानादेखि ठूला व्यवसायीहरु समेटिएको थापाले बताए।
उनले आफ्नो प्यानल नाडाको इतिहासमै पहिलो पटक समावेशी भएको दावी गरे। उनको प्यानलमार्फत नाडा निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेकी छन्। विवाइडीको अधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंककी कार्यकारी निर्देशक यमुना श्रेष्ठले सदस्य पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेकी हुन्।
प्यानलमा अटो मोबाइल्स व्यवसायसँग सम्बन्धीत तथा स्पेयर पार्टस् क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यवसायीहरू आबद्ध भएकाले सबै क्षेत्रका समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘हामीले सबै प्रदेशका साथीहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेका छौं । छलफलमा उठेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं,’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले भने।
मोफसलमा बसेर सानो व्यवसायबाट सुरू गरेकाले साना तथा मझौला व्यवसायको समस्या समाधान गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेशस्तरमा निर्माण भएका प्रादेशिक संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, व्यवसायीमैत्री वातावरण तयार गर्न आवश्यक पहल गर्ने, अटो लोनको सीमा बढाउने, सवारी साधान तथा पार्टपुर्जा आयात, एसेम्बल र उत्पादनमा प्रस्ट नीति निर्माणको लागि सरकारसँग लविङ्ग गर्नुका साथै अटो क्षेत्रका समस्या समाधानमा आफ्नो प्यानल लागि पर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष पदका प्रत्यासी थापाको प्यानलमा नाडाको वर्तमान कार्य समितिका आकाश गोल्छा, निराकार श्रेष्ठ, दिपक अग्रवाल, कपिल शिवाकोटी र शुभाशिष थपलिया छन्। त्यस्तै यमुना श्रेष्ठ, अमरज्योति रञ्जित, बि.एन. पाठक, दिपेन्द्रकुमार मिश्र, नवराज भुसाल, नारायणप्रसाद पौडेल (राजन), प्रदिपमान प्रधान, प्रकाश सिग्देल, रिद्धि कार्की, सगुन बि.एस्. कंसाकार, सञ्जयकुमार खेतान छन्।
नाडाको यहि मंसिर २२ गते काठमाडौंमा हुने ४५ औँ साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ। जसमा अध्यक्षबाहेक १७ सदस्य चुनिनेछन्। थापाका प्रतिस्पर्धी सुजुकी कारको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिजी होल्डिङ्स तथा सिजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरी छन्। उनले पनि बुधबार आफ्नो प्यानल सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १६, २०७८, १०:२८:००